Wanta filatame dhangeessi. Wanta filatame irratti hundaa'uun, ajajni qaaqa banama kan malees ajaja kana baafata fayyadamuun Dhangii banuu dandeessa.
filiDhangii - Filannoo Dhangii (Taattoota)
Qaaqa daaggoo taattoo banuun Iddoo itti amala daaggoo taattoo foyyeesitu. Daaggoon taattoo "vertical" bal'ina taattoo deetaa bukkeetti madda keessooti.
Qaaqa bal'ina taattoo banuunBakka ati amala bal'ina taattoo itti fooyyesitu. Bal'inni taattoo madda keessootti cinaa maalima taattoo hundaaati.
Qaaqa taattoo dilgatoo banuunIddoo amala taattoo dilgatoo itti fooyyesitu. Taattoo dilgatoo bali'na xiqqaa 3D dhaan. Faankishiniin kun taattoo 3D tiif jiraata.
Amala mataduree filamanii foyyessa.
Amala daangaa,bal'ina fi arfii waayoof qindeessa.
Siilloo Y qaaqaa banaamala siilloo Y jijjiiruuf.
Tarsaa qaaqaa banuun amala tarsaa qindeessa.
Qaaqaan kun qaphxii deetaa filamee akka jijjiiramu eeyyama. Qaaqaan kun kan mul'atu gosni deetaa tokkoo qofti yoo filatamee yommuu ati Dhangii - Filannoo Dhangii filattu. Baafanni tokko tokko galfataa taatoo 2D yookan 3D dhaan qofa argama.
Title is: Filannoo Dhangii